News - Ihe mkpuchi gị na-ekpuchi nke ọma?
Ihe mkpuchi haze gị ọ na-eyi n'ụzọ ziri ezi?
Anti haze nkpuchi bụ ihe dị mkpa kwa ụbọchị na ndụ kwa ụbọchị, nke nwere ike igbochi uzuzu, haze, ihe nfụkasị pollen na ọrụ ndị ọzọ, ma gbochie ájá ịbanye na ngụgụ ahụ site na oghere ọnụ na oghere imi na imebi ahụ. Ugbu a, ka anyị hụ ihe ụzọ ziri ezi iji na-ekpuchi a haze nkpuchi bụ.
Nke mbụ, a na-atụ aro nhọrọ nke ihe nkpuchi haze dịka akara ahụ, n'ihi na ụdị ngwaahịa a na-emetụta akpụkpọ ahụ anyị, ọkachasị usoro izizi nke usoro nchekwa mmadụ (oghere ọnụ, akụkụ iku ume), na ihe ndị dị ala na-eji eme ihe dị ala adịghịkwa mma, ya mere ihe nkpuchi dị ala ga-emebi akpụkpọ ihu anyị. Tupu anyị eyi, anyị kwesịrị ịkwọ aka anyị, na mgbe anyị na-akpụzi imi imi, anyị ga-eji aka abụọ tinye ya; na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị chọrọ iyi uwe mara mma karị, anyị kwesịrị ịlele ikuku ikuku.
Mgbe ị na-ebupute ihe nkpuchi haze na akpa nhicha, a na-atụ aro ka ị ghara iji mkpịsị aka dị ka o kwere mee, n'ihi na ọ dị mfe iji nchacha na nza nza na akpa, nke ga-ebute oke mbibi na ọnwụ. Jiri nwayọ dọka nke mbụ apịachi agbaji, ejila oke ike. Mgbe ọ gbasasịrị, enwere ike itinye ya na ebe ikuku maka oge iji wepụ ụfọdụ gas na-emerụ ahụ nke mepụtara na usoro nhazi ahụ, mana ejila mmiri saa ya maka ịdị ọcha. Ejikwala mmiri saa ya. Tinye nza n'ime akụkụ nke nkpuchi dịka ọdịdị nke ngwaahịa a. (n'akụkụ ihu). Tinye akwa nke imi Velcro na ọnọdụ Velcro kwekọrọ na ihe nkpuchi ahụ. N'ozuzu, ọnọdụ a dị nso na imi nke ihu, ya na waya dị gịrịị dị ka ndozi. Dị ka nha ihu gị, dozie eriri na-agbanwe n'akụkụ abụọ nke nkpuchi ahụ ka ọ ghara inwe ọdịiche doro anya mgbe ị na-eyi ya, ma pịa waya ahụ nke ọma ruo mgbe waya ahụ gbanyere kpamkpam n'ụdị imi, ka enweghi ihe putara ihe di netiti nkpuchi na imi.